Madaxweynihii ugu horeeyay ee Maamul Goboleed oo la saftay Farmaajo, kana hor yimid Rooble - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Madaxweynihii ugu horeeyay ee Maamul Goboleed oo la saftay Farmaajo, kana hor yimid Rooble - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxweynaha maamul Goboleedka Koonfur Galbeed C/casiis Maxamed Xasan (Lafta-gareen) ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee la saftay Maxamed C/llaahi Farmaajo oo dib ula wareegay Doorashada 26 Disembar 2021.
Qoraal kasoo baxay Madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa lagu shaaciyey inaysan ka qeyb galeynin shirka Golaha Wadatashiga ee uu shaaciyey Ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble, balse ay qeyb ka yihiin shirka uu baaqay Farmaajo.
“Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) wuxuu caddeynayaa in uusan kasoo qeybgali doonin Shirka uu iclaamiyay Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble”. ayaa lagu yiri qoraalka.
Arrintan ayuu Lafta-gareen sabab uga dhigay: “Go’aankan wuxuu ka dhashay keddib markii lagu xadgudbay madaxbannaanida Guddiga Xallinta Khilaafaadka oo 7 xubnood laga saaray iyo Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka ee Federaal oo shalay la kala qeybiyay. Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay diyaar u tahay ka qeybgalka baaqa Madaxweynaha si looga tashado sidii lagu samatabixin lahaa geeddiga socodka doorashooyinka dalka”
Go’aanka C/casiis Lafta-gareen ayaa ah mid hore loo filayay, taasoo ay ugu wacan tahay inuu ku qabsan yahay raacista mowqifka Farmaajo.
Previous articleMidowga Musharixiinta oo Waalli ku tilmaamay Go’aankii Farmaajo, Digniin Culusna u diray Mursal
Next articleCabdi Xaashi oo ku baaqay in la isugu yeero Aqalka sare iyo Doorasho Guddoon (Jawaab ku socota Mursal)